Duqa Boosaaso oo Safar Ku tegay deegaano Hoos yimaada Magaalada BOSASO+Sawiro – SBC
Duqa Boosaaso oo Safar Ku tegay deegaano Hoos yimaada Magaalada BOSASO+Sawiro
Posted by Webmaster on February 18, 2012 Comments
Kormeerka duqa degmada Boosaaso mudane Xasan Cabdale Xasan ayaa waxaa kuwo helinayey xildhibaan Maxamad Cabdullahi Cali kaarad oo ka tirsan Barlmaanka Dawlada Puntland iyo xildhibaan Bashiir oo katirsan golaha deegaanka ee degmada Boosaaso.
Ujeedada waftgan ayaa ahayd sidii ay ugu kuur gali lahaayeen xaaladaha caafimaad, Amni, waxbarasho ee deegaanada Bacaad,Buruc iyo Buurgaaban oo katirsan degmada Boosaaso.
Deegaanada waa kuwo Boosaaso kaga beegan dhanka Bariga waxayna qiyaas ahaan u jiraan 100Km waana dhula wadadoodu ay aad u adagtahay waxaana loo socdaa mudo dhan Sadex saacadood marka la eego qiyaasta ay magaalada Boosaaso u jiraan iyo saacadaha loo soconayo ayaa ka marag kacaya wada xumida ka jirta deegaanadaasi.
Masuuliyiintan waxaa si diiran u soo dhaweeyay dadka deegaanka iyagoo waftiga usameeyay casumaad si heersare ah loosoo agaasimaya.
Qado sharaf loo sameeyay waftiga kadib ayey waftigu kulan xog warysi ah la yeesheen odayaasha deegaanada Bacaad Buruc iyo Burgaaban wuxuuna kulanku ahaa mid uu gudoomiyaha degmada Boosaaso mudane Xasan Cabdalle Xasan iyo waftigiisu ay ku doonayeen in ay ku ogaadaan cabashooyinka deegaanka .
Odayaasha deegaanka ayaa masuuliyiinta u sheegay cabashooyinka ay doonayaan in wax looga qabto dadka deegaanka
dadka deegaanadaasi waa kuwo intooda badan ku tiirsan wax soosaarka dhanka Mayadiga iyo Beeyada oo dhulkaasi uu qani ku yahay
Salaan qaaliya kadib.
duqa degmada waxaa u soo jeedinayaa hambalyo wanaagsan,mida labaad waa uu ku mahadsan yahay, marba hadii uu ka fekaraayo degaanada hoos yimaada magaalada bosaso,
magaalooyinka hada uu tegay buruc bacaad iyo buurgaaban waa magaalooyin taariikhi ah, waaana kuwa ay ku horo madhay degmadu,,,,,,,,,in hoos loo fiirshona waa mudan yihiin xag walba,…cafimaad,amni,jidad,waxbarasho,iyo tageero dhaqaale, shaqo……….